Caddaaladda Mareykanka Musuqmaasuqday? B737 Max Dhibbanayaasha wax fursad ah kama helin Boeing
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Caddaaladda Mareykanka Musuqmaasuqday? B737 Max Dhibbanayaasha wax fursad ah kama helin Boeing
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Itoobiya • Wararka Dowladda • Indho Indho Indoneesiya • News • Dadka • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Sidee mid u wacayaa haddii dacwad ooge kiis sare oo ciqaab ah oo ka dhan ah shirkad weyn (Boeing) uu ku biiro shirkadda qareenka ee difaacday kiiskeeda ugu weyn dhowr bilood dacwadda ka dib. Ka waran waxa loogu yeero Boeing modus operandi, ama laga yaabee in Caddaaladda Mareykanka la beeniyay?
346 qof ayaa ku dhimatay sanadkii 2019 labo shil oo Boeing 737 MAX ah oo ku dul socday diyaaradda Ethiopian Airlines ee dalka Itoobiya iyo mar sii horeysay diyaarad ay leedahay Lyon Air oo ku taal dalka Indonesia. Maxkamadeyn ciqaabeed oo ka dhan ah Boeing waxaa lagu xaliyay horaantii sanadkan heshiis dib-u-dhigis oo dib loo dhigay, waxayna muujineysaa hadda sababta.
Boeing waa shirkad soosaara diyaaradaha oo fadhigeedu yahay Seattle, xarunteeduna waa Chicago, Illinois. Maxay tahay sababta dacwadda ciqaabta ee ka dhanka ah Boeing loogu xukumayo Ft. Worth, Texas?
Shirkada difaaca sharciga ee Boeing ee Kirkland & Ellis ayaa heshiis macaan la gashay qareenka sare ee Mareykanka Erin Nealy Cox. Bilo kadib tan Erin Nealy Cox waxay ka tagtay shaqadeedii dawladeed ee caan ka ahayd waxayna ku biirtay Kirkland & Ellis iyadoo sare u qaadaysa tuhunka ku saabsan soosaarida bisil.
Kiiska dambiilaha ah ee Boeing waxaa loola jeedaa inuu cadaalad u keeno 346 qoys oo ka mid ah dadkii ku dhintay shilalkii Ethiopian Airlines iyo Lion Air. Natiijada tijaabadan Texas waxay noqotay in aan wax sare oo sare oo Boeing ah lagu soo oogin.
On January 7 ee sanadkan eTurboNews ayaa daabacay maqaal uu qoray Paul Hudson, madaxa kooxda u dooda xuquuqda macaamiisha Xuquuqda Warqadaha. Wuxuu qoray: Boeing ayaa lagu soo oogay 737 Max khiyaano khiyaano ah, inuu bixiyo in ka badan $ 2.5 bilyan oo ganaax ah.
Warbixin maanta lagu daabacay Weriyaha Dembiyada Shirkadeed ayaa shaaca ka qaaday faahfaahinta qorshahan isagoo tilmaamaya in qareenka hogaaminaya dacwada waaxda cadaalada ee Mareykanka, Garyaqaankii hore ee Mareykanka Erin Nealy Cox ay ku biirtay isla shirkadii sharciga ee Boeing ay kireysatay si ay uga difaacdo dacwadaha heerka sare ah ee ay soo oogtay.
Xaraynta dacwada Boeing ee Ft. Worth, Texas waxay layaab ku noqotay bilowgii tan iyo markii Texas aysan xiriir la lahayn midkan.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in kiiska lagu dhameeyay heshiis dib u dhigis oo xeer ilaalin ah. Kani wuxuu ahaa heshiis uu Borofisarka Sharciga Columbia John Coffee waqtigaas loogu yeero - “mid ka mid ah heshiisyadii ugu xumaa ee dacwadda dib loo dhigay ee aan arkay.”
Wargeyska The Reporter Reporter ayaa daabacay jawaab ay bixiyeen Michael Stumo iyo Nadia Milleon, oo gabadhoodii 24 jirka ahayd ku waayey shilka diyaaradda Ethiopian Airline.
Waxaan ka xanaaqnay in waaxda cadaalada ee dacwad oogaha ay jareen heshiis kalgacal leh oo ay la galeen Boeing kaas oo u ogolaaday (Agaasimihii hore ee Boeing) Dennis Muilenberg iyo howl wadeenada Boeing iyo xubnaha guddiga in ay ka baxeen ciladooda dayaca danbiyeed iyo khayaanada ay sababeen dhimashada Samya intii ay hodanka ku ahaayeen. naftooda, ”Stumo iyo Milleron ayaa ku yiri bayaan ay kaga jawaabayaan warka. “Waan ku wareernay sababta ay Waaxda Caddaaladda u dooratay Degmada Waqooyiga ee Texas iyadoo la siiyay in mid ka mid ah habdhaqanka dambiilenimo uusan wax xiriir ah ku lahayn degmadaas. Miyuu ahaa garsoore u hoggaansamaya in Boeing loo fadilay? Miyuu ahaa dacwad oogeyaal ogaa kooxda difaaca dambiyada Boeing? Tani waa war naxdin leh oo cusub. ”
Paul Hudson oo ka tirsan kooxda macaamiisha ah Xuquuqda Warqadaha ayaa sheegay eTurboNews kiiska “wuxuu tusaale u yahay albaabka wareegaya ee kumanaan shaqaale dowladeed ah ay u shaqo tagaan xisbiyo ay ku xukumaan inay yihiin saraakiisha dowlada. Laakiin albaabka wareegaya looma maleynayo inuu yahay suunka wax lagu raro.
Hudson wuxuu ku soo gabagabeeyay: "Haddii xeer ilaaliyaha guud ee federaalku uu ku biiro xisbi eedaysane ama shirkadeeda difaaca waxyar uun ka dib markii uu dawlada Maraykanka ku matalay arin dambiyeed la xidhiidha, waxay kor u qaadaysaa welwelka muuqaalka iyo arrimaha anshaxa,"